Font ku jilicsanaanta KDE, Xfce iyo kuwa kale | Laga soo bilaabo Linux
Font ku jilicsanaanta KDE, Xfce iyo kuwa kale
Mid ka mid ah waxyaabaha aan jeclaa GNU / Linux, iyo in si la yaab leh ii caawisay inaan si dhakhso leh uga fogaado Windows, wuxuu ahaa jilicsanaanta qoraalka.
Dhab ahaan, ma fahmin sida aan maalin dhan ugu qaadan lahaa miiska hortiisa Windows XP yeelashada jilicsanaanta noocan oo kale ah, ama halkii, aan lahayn wax dardar-qabasho ah haba yaraatee. Laakiin haye, ujeedkeygu maahan inaan xaabo ka sameeyo geedka soo dhacay.
Ma ahayn ilaa Windows Vista in Microsoft ay bilaabeen inay ka walwalaan arrintan, laakiin waa wax aan horeyba ugu hagaajin lahayn kombuyuutarrada aan jecel nahay muddo dheer.
Xaqiiqdii, suurtagal ahaan qaybinta ka taxadarta faahfaahintaan ayaa ah tan ugu saxsan Ubuntu. Aan aragno qaababka aan u adeegsan karno.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in dejintu ay kala duwanaan karto iyadoo ku xiran kaarka fiidiyowga ama nooca kormeeraha aan isticmaalno, sidaa darteed hababkaasi ma noqon karaan kuwa aan khaldami karin.
Habka ugu fudud ee loo yeesho farta indhaha ka raalli gelisa KDE waa in la aado Dookhyada Nidaamka »Imaatinka Arjiga» Fonts.
Caadi ahaan, horeyba waxaa loogu qaabeeyey qaab ahaan si loo isticmaalo qaabeyn uu nidaamku bixiyo:
Hubaal, waan beddeli karnaa habdhaqankan, oo waxaan dooran karnaa ikhtiyaarka Awooday, waxaan gujineynaa Samee oo waxaan ku hagaajineynaa xulashooyinka hadba baahidayada.
Marka laga hadlayo XFCE sidoo kale waa wax aad u fudud in la habeeyo font jilitaanka. Tan awgeed waxaan menu » qaabeynta » Muuqaal » Font oo waxaan calaamadeyneynaa xulashada Daar jilicsanaanta geeska iyo sidii kiiskii hore, waxaan xulanaa xulashooyinka ku habboon.
Labada xaaladoodba, waxay kuxirantahay xalka kormeeraheena, waan la ciyaari karnaa PPP (Dhibcaha per Inch) taas oo noo ogolaaneysa inaan bedelno cabirka xarfaha.
Haddii ay dhacdo in noocyadaas midkoodna aanu shaqeynin, waxaan u adeegsan karnaa Qorshaha B, taasi waa, ka habka gacanta, taas oo aan ahayn cid kale oo aan ahayn abuurista feylka ~ / .fonts.conf oo gudaha geli:
run run iftiin iftiin rgb run lcddefault
Maskaxda ku hay in haddii kormeerahaagu aanu ahayn LCD, waa inaan iska indhatirnaa khadadka:
Iyo haddii ay Qorshaha B ma shaqeyn doonto, marwalba waan rakibi karnaa Xad dhaaf, labadaba Debian, OpenSUSEsida ku jirta Archlinux ee AUR.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Font ku jilicsanaanta KDE, Xfce iyo kuwa kale
Tilmaam fudud oo laga yaabo inay qaar badani dhihi doonaan inay horeyba u ogaayeen, laakiin shaki la'aan aad bay faa'iido u leedahay
Ma aqaano haddii ay tahay su'aal ku saabsan Gnome ama Linux guud ahaan ... .. laakiin xoogaa ka hor waxaan aqriyay inaadan mar dambe u baahnayn inaad wax sameyso si aad ugu haysato xarfaha waaweyn Linux. Si kale haddii loo dhigo, mar dambe looma baahnayn in "la dhejiyo" qaabka Ubuntu maxaa yeelay xirmooyinka la xiriira arrinta waa la saxay. Gaar ahaan, kama aanan walwalin arrinta muddo dheer, taas oo waqtigaas walaac laga qabay. Waxaa jira arrin ku saabsan shaashadaha HiDPI oo mar kale keenaya caqabado cusub marka loo eego noocyada iyo astaamaha. Waxaan rajeynayaa inaan dhowaan tijaabiyo Gnome 3.10 oo umuuqda inay ka shaqeysay arintan iyadoo la adeegsanayo kaliya astaamaha SVG waxaana ugu muhiimsan helitaanka laptop nooca "retina"
Haddii aad rabto fartu inay sifiican uga dhex muuqato labada Chromium iyo Chrome, waa inaad qasab ku abuurtaa feylka .fonts.conf ilaa aad isticmaasho Ubuntu ama waxyaabaha ka soo baxa.
Debian ahaan wax dhibaato ah iguma qabin bixinta. maxaa intaa dheer, KDE waxay umuuqataa mid qurux badan.
Waxaan u ciyaarayaa u doodaha sheydaanka: XP-ka noocyadiisu wey fiicnaayeen, dookhyada shaashad waad dardar galisay ClearType jilicsanaanta ayaa fiicneyd ...
Haa, runtuna waxay tahay anti-aliating-ka Windows XP ima qancin gabi ahaanba. Laga bilaabo Windows Vista, qaabeynta qaabeynta ayaa si aad ah u fiicnaatay waxayna ahayd ugu yaraan in la isticmaalo.
Weli, font jilitaanka GNU / Linux runti waa qabow.
Windows 8 ayaa aad uga fiican. ku saabsan 7 iyo aragtida.
Taas waan kugu raacsanahay. Sikastaba, waxaan horeyba ugu rakibay Windows Vista oo wata Debian Wheezy kombuyutarkayga.
Waxay ahayd fartii hore. In Vista iyo 7 waxay bilaabeen adeegsiga Segoe UI, taas oo ka fiicnaansho badan MS Sans Serif.
In kasta oo KDE ay aad uga fiican tahay, in kastoo aysan ku imaanin wax iska caadi ah. Isha Aller waa wax lagu farxo
Adoo dhaqaajinaya ClearType, MS Sans Serif wuxuu umuuqday mid joogto ah. Laga bilaabo Windows Vista, ClearType si weyn ayuu uga fiicnaaday Windows XP.
Sifiican ugama hadli kartid Debian ... Ama distro kale!
Ku jawaab super
Nacaybka Ubuntu waa la ogaaday!
kama dambaysta ayaa noqon doonta qorshaha D: p wax aanan jeclayn inay u muuqdaan xoogaa mugdi ah.
sababta aan xiriir xiriir ah ugu sameeyay tusaale meel kale ah: ln -s /usr/share/fontconfig/conf.avail/11-lcdfilter-default /etc/fonts/conf.d/11-lcdfilter-default waxaan siinnaa galaan waana intaas , Debian deggan labadaba waxay ku yaalliin / iwm / markaa waa qaabab duugoobay, tijaabinta Debian / sid waxay si cad u leeyihiin tan tusaalaha 😉 hal shay oo kale ha u isticmaalin autohint la lcdfilter ugu yaraan taasi waa waxa wiki arch leeyahay.
Ku jawaab Garbage_Killer
Farsamooyinka jilicsan ... Waa inaad isticmaashaa Terminal oo aad joojisaa jilicsanaanta jilicsan, saameynta wanaagsan iyo kala-guurka buniga.
Ku jawaab lynx
waa in jilicsanaantu daciif tahay ... xD
Taasi waa fikradda.
Fluxbox, qaababka, astaamaha, tilmaamaha iyo dulucda, waxaan u isticmaalaa "lxappearance" ee LXDE.
Waxay umuuqataa ikhtiyaar wanaagsan.
* Waxay ila tahay aniga
Ma fahmin sababta ay u jiraan 3 ikhtiyaar oo jilicsan.
Kan jilicsan miyuu qaataa ilo yar? Oo maxaan u doonayaa?
Way fiicnaan laheyd haddii ay jilcisay HAA ama MAYA, iyo HAA inay tahay ikhtiyaarka ugu fiican ee ugu macquulsan.
Ku jawaab thuner
OS X Mavericks waa bilaash waxaana ku jira waxyaabo aan horey u haysanay
Markab dagaal oo cusub oo ay leeyihiin ciidamada badda ee Mareykanka ayaa isticmaali doona Linux